ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “နိုင်သလောက်ပဲ လုပ်ကြပါဗျိုး”
စလုံး အိမ်မှာ တစ်ခါ မှ အလူမလုပ်ဘူးပါ..အိမ်မှာ မလုပ်တော့ကျောင်းမှာလဲ မလုပ်ဘူးပါ။ သူများကဖိတ်လ္လဲု၁၀ ခါ ဖိတ်မှ တစ်ခ်ါသွားပါသည်။ နောက်ပိုင်း ဘယ်သူကမှ မဖိတ်တော့ပါ။ ကိုပေါဖိတ်လျင်တော့လာပါမည်။
ကျနော်တို့က (ထုံးစံအတိုင်း) အစောကြီးရောက်သွားတော့
(ယုံပါတယ်။ ယုံပါတယ်။ )
>>>> မခင်ဦးမေ..... အာ.... မခင်ဦးမေကို ဖိတ်ရမှာပေါ့။ လူတထောင်လောက် ဖိတ်တဲ့ အိမ်တက်အလှူ လုပ်ဖြစ်တဲ့ အခါကျရင်လေ။ တန်းစီရမယ်။း-)
စောစောသွားရခြင်းအကြောင်းကတော့ “စောစောထသော ပိုးကောင်သည် ငှက်စာဖြစ်၏” ဆိုတဲ့ စကားပုံအတိုင်းပါပဲ။
ဟင်..အိမ်ဝယ်ပြီးတာ ကြာလှပြီ.. အိမ်တက် မလုပ်ရသေးဘူး.
>>>> မခင်ဦးမေ..... အလှူလုပ်ဖြစ်ရင်လို့ ပြောတာ။ စကားပြော မွှားသွားလို့။ အိမ်တက်က လုပ်ပြီးသွားပြီခင်ည။ ဘုန်းကြီးကို အိမ်မှာဆွမ်းကပ်ပြီး လူတွေကိုတော့ အရှေ့ဘက်ကမ်းခြေမှာ BBQ pit တခု ငှားရမ်းပြီး ပျော်ပွဲစားထွက်လိုက်ပါတယ်။
နေရာအကျပ်အတည်းကတော့ စလုံးအိမ်တွေရဲ့ သဘာဝမို့ ခွင့်လွှတ်ရမှာပါပဲ။ မြန်မာ့ဓလေ့အစဉ်အလာ လဲထိန်းသိမ်းရဦးမှာကိုး။ နောက်တစ်ခုက တကယ်ခင်တဲ့လူအနည်းစုပဲရွေးဖိတ်တယ်ဆိုတာကလဲ၊အဖိတ်မခံရဘဲသတင်းကြားတဲ့လူက သူ တို့ ဟာတကယ်ခင်တဲ့ထဲမပါဘူးဆိုပြီး မခေါ်မပြော၊မိတ်ပျက်တဲ့အထိဖြစ်သွားနိုင်သေးတယ်လေ။ ဒါလဲကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့ဓလေ့တစ်ခုပဲကိုး။
ကိုပေါတင်ပြချက်များကအလွန် သတိထားသင့်သော အချက်များဖြစ်ပါတယ်။ ဖိတ်တဲ့လူအရေအတွက်နဲ့ မျှအောင်
်၊စားပွဲဝိုင်းကိုလဲ ၊လေး၊ငါးဝိုင်းလောက်၊(ဖြစ်နိုင်ရင် အိပ်ခန်းကိုပါခဏရှင်းပြီး)စားပွဲခင်းထားမယ်။ ဒါဆို လူနှစ်ဆယ်လောက်တစ်ခါထဲဧည့်ခံနိုင်မယ်။ နောက်အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ ဖိတ်ရမယ့်လူကတကယ်များများဖိတ်ချင်တယ်၊မဖိတ်လို့ လဲမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ အချိန်ခွဲပြီးဖိတ်သင့်တာပါပဲ။
လာတဲ့လူတွေလဲသဘောပေါက်မယ်လေ။ကိုယ့်ကိုဖိတ်တဲ့အချိန်ကျော်ထိနေချင်ရင်တော့ ခုနကလိုကော်ရစ်ဒါမှာချထားတဲ့ခုံအပိုတွေမှာစကားထိုင်ပြောလို့ ရမှာပဲ။
ရိုးရာလဲမပျက်အောင်၊အားလုံးလဲပျော်အောင်၊အလှုလဲထမြောက်အောင်တွေးကြည့်တာပါ။ မဟုတ်ရင်တော့ [(တစ်ခါတစ်လေမှာတချို့ သော)(ကွင်းစကွင်းပိတ်နှင့်ရေ၊းပါသည်)] ရွှေမြန်မာများ အိမ်တက်အလှုလုပ်တာဟာ၊ အလှုသဘောထက် ၀ယ်ထားတဲ့ အိမ်ကိုခေါ်ပြသလို သက်သက်ကြီးဖြစ်နေသလားလို့ ..
I agree with u. here do any ah lu very difficult to do coz of space problem. The best way is arrange the timing, n then one time around maximum7person is the best way to do....
>>>>ကမောင်ရင်.... “သူလည်းလေ လောကီသားပေမို့...” ဆိုသလိုပေါ့ ခင်ဗျာ။
>>>>Life is for Success.... ဟုတ်တယ်။ အချိန်အပိုင်းအခြားအလိုက် (သို့မဟုတ်) စားပွဲ ငါးဝိုင်းလောက် ဆိုရင် ပြဿနာပြေလည်နိုင်တယ်။
i can hear criticism and people cringing :)
that's the problem with urbanites and this country's space.
if i get invited to such event, i tried to go as late as possible :)
if the food is finished then its just my luck.
i don't want to stand and wait like u mentioned.